FAAHFAAHIN: M/weyne Deni oo seefta galka kala baxaya, Yuuse bedelayaa, lana magacaabay!
March 26, 2020 NEWS 4
GAROOWE(P-TIMES) – Madaxweynaha Puntland Siciid Deni oo shalay dib ugu laabtay Garoowe, 7 maalmood oo uu nasiino iyo dalxiis u jooga magaalada Eyl ayaa hadda bilaabay isku shaandheynta xubnaha golihiisa Xukuumadda qaarkood iyo Agaasimayaasha wasaaraddaha dawladda.
Warar hordhac ah oo ay heshay PuntlandTimes ayaa u xaqiijinaya in Madaxweynuhu 48 saac ee nagu soo wajahan sameyn doono Isku shaadheyn ugu horeyn saameyn ku yeelan doonta Agaasimayaasha & Hay’addaha madax banaan ee Xukuumaddiisa.
Wararka ayaa xaqiijinaya in Isbedelkan lagu sameyn doono Agaasimaha wasaaraddaha kala ah.
1- Agaasimaha Arrimaha Gudaha, Dawladdaha Hoose, Federaalka & Dimuquraadiyada, ganacsade saaxiib la ah Madaxweynaha ayaa doonaya in jagadan loo daayo Agaasimaha hadda jooga oo ay isku beel kasoo jeedaan, balse culeys xoog leh oo ka imaanaya Wasiirka iyo Hay’addaha caalamiga ah ayaa waqtigan haysta Madaxweyne Deni.
2- Wasaaradda Amniga & DDR-ta, jagadan ayaa hadda Kusime uu ka yahay Agaasime Waaxeed katirsan Wasaaradda.
3- Wasaaradda Waxbarashada & Tacliinta Sare, ayaa la bedelayaa Agaasimaha hadda jooga, waxaana horey loogu eedeeyey in uu qeyb ka yahay Caqabadaha dhanka waxbarashada ee u dhaxeeya dawladda Faderaalka Soomaaliya & Puntland, sida ay sheegeen mudanayasha baarlamaanka Faderaalka oo kasoo jeeda Puntland.
4- Agaasinka guud ee Hay’adda wadooyinka Puntland ee PHA ayaa isbedel lagu sameyn doonaa, ka dib markii ay soo baxeen in ay waxba ka dhaqaajin weyday howlaha loo xilsaaray, gaar ahaana Madaxtooyada ku badatay dhaliilaha la xariira arrimaha jidadka Puntland.
5- Agaasimaha guud ee Wasaaradda Ganacsiga ayaa loo magacaabayaa, mid kamid ah dhalinyaradda dhawaan ka qalinjabiyey jaamacaddaha dalka.
6- PuntlandTv, Agaasime guud ayaa loo magacaabi doonaa, waxaana horey booskan looga qaaday Jamal Arab Yusuf oo ay dad badan aad u dhaleeceeyen xil ka qaadistiisa, waxaana hadda loo magacaabayaa mid kamid ah Dhalinyaradda Qurbaha, gaar ahaana katimi dalka UK.
7- Shaqaalaha Rayidka ah, Guddigan horey ayay u kala direen baarlamaanka Puntlandkii hore 2018kii, balse Gudoomiyaha guddigan Mustafa Shabac oo lagu eedeeyey musuqmaasuq iyo wax isdaba marin baahsan ayaa iska watay shaqada, waxaana hadda lagu bedelayaa xubno guddi cusub ah.
8- Agaasimaha wasaaradda Caafimaadka, Saaxiibada Madaxweynaha ayaa ku dhegan oo doonaya in qof taabacsan dhankooda loo magacaabo wasaaraddan, balse Madaxweynaha Puntland ayaa doonaya in uu booskan u daayo Agaasimaha hadda jooga oo ay saaxiibo ahaayeen waqtigii loolanka doorashada, uguna hiiliyey codka xildhibaanimo.
In uu madaxweyne Puntland ahi mar kasta seefta galka kala soo baxo oo dib isugu shaandheyn laga dhammaan waayo liidnimo weyn ayay Villa Garoowe ku tahay oo shacabka Puntland na sumcad xumo ayay ku tahay xaqiiqdii. Sababta keentay na waa midda salka ku haysa dhaqan xumada la caadeystay ee eexda casabanimo iyo musuq maasuqa ku hoos xardhan.
Xaqiiqadu waxay tahay in waddan kasta oo ama burbur ku dhacay ama ka soo kabanaya uu marka hore u baahdo Guddi Farsamo oo in muddo ah hanaanka dowlad wanaagga tartiib ugu daaddaheeya. Guddiga Farsamo (Technocrats) waa mid aalaa ba ka kooban dad dowladnimada qaybaheeda aasaasiga ah aqoon, xirfad iyo khibrad ba u leh. Mar haddii in halkaas wax laga soo billaabo la seegay waxaa calal aqal Puntland ku habboonayd in dadka xilalka dowliga loo igmayo ay yihiin kuwo aqoon iyo xirfad lagu asteeyay oo waajibaadkooda si xarago leh u gudan kara.
In qof haybtiisa loogu magacaabo jago uusan xilkeeda qaadi karin wax aan ragaad iyo qaladaad joogto ah ahayn laga ma dheefayo. Reer hebelnimadan cid waliba lagu qancin rabo ee dowlad wanaagga nagaga gudban in dadweynaha laga jaahil bixiyo ayuu ahaa waajibka koowaad ee xukuumadda iyo idaacadaha Puntland.
Comrade Boodari waan kuu qiray in maskaxdaadu sareyso oo heer caalami mareyso.
Tan iga yaabisey waxay tahay kuwa ku loolamaya in ay hantiyaan wasarada caafimaadka. Ma waxay isdhaheen coronvirus ayaa dhaqaale soo wada.
My Comrade Abdiweli,
Waxii karaankeena ah ayanu dadaalka badinno oo adiga na iga guddoon mahadnaq kal iyo laab ah ina adeer guubaabadaas qiimaha badan ee aad igu sii dhiirrigalisay.
Waxaad na runtii aad igaga qosliyay qaniinyadaas yar oo kafta ah ee aad isha kaga toogatay halka iyo heerka uu kuwii hoggaanka lagu halleynayay haatan damacu la marayo oo ka marayo. A classic swipe indeed!
But we are heading in same direction and with a common end result and To witness a GREAT SOMALIA in our lifetime. I hope it’s not far fetched.